आफ से आफ निस्कने एक प्रकारको आवाज, जो सुतेर निधाएको बेलामा स्वास लिँदा निस्कछ , त्यसलाई घुर्नु ( स्नोरिङ ) भनिन्छ । सामान्यतया निधाएको बेलामा घुर्र्नु कुनै रोगको परिभाषा भित्र पर्दैन..
काठमाडौँ – निबारणको अवस्थामा रहेको कुष्ठरोगबाट नेपालमा ३० हजार बढी व्यक्ति अपाङ्ग भएका छन् । समयमै रोग पत्ता नलाग्दा उनीहरु अपाङ्ग भएको अनुमान गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग कुष्ठरोग नियन्त्रण..
काठमाडौं–हिजोआज धेरैलाई दाँतको समस्या रहेको छ । दाँत पहेँलो हुनु अहिलेको मूख्य समस्या हो । सहि तरिकाले दाँतको हेरचाह नगर्दा दाँत पहेँलो हुन्छ । पराग, सुर्ती खाँदा पनि दाँत पहेँलो हुन्छ..
काठमाडौं–कमजोरी महसुस हुनु तथा चक्कर लाग्नु ब्लड प्रेसरको लक्षण हो । यसले दिमागमा समेत असर गर्छ । ब्लड प्रेसर कम भएकाहरुलाई चिकित्सकहरु खानामा ध्यान दिन आग्रह गर्छन् । त्यसैले यस्ता..
के हो जिका भाइरस ? जिका भाइरस लामखुटेबाट सर्ने रोग हो । डेन्गु र याल्लो फिभरजस्तै यो पनि लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्छ । तर जिकाबाट संक्रमित लामखुट्टेले टोकेको खण्डमा मात्रै यो रोग..
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिण अमेरिकामा फैलिरहेको जिका भाइरसको संक्रमणलाई विश्व स्वास्थ्य संकटकालको रुपमा घेाषणा गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जिका भाइरसको समस्या समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रयासलाई तिव्र पार्नु..
डाक्टर तथा पोषण विज्ञहरुको सल्लाह अनुसार मानिसले दिनमा कम्तिमा पनि ८ गिलास वा झण्डै दुइ लिटर पानी पिउनु अनिवार्य हुन्छ । तर दिनभरमा कति पानी पिउने भन्ने कुरा मानिसको सरीरको..
जनस्वास्थ्य सरोकार । गत वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी घाइते भएकामध्ये ४ हजार ४ सय मानिस [health ministry] अपाङ्ग भएका छन् । भूकम्पपछि उपत्यकासहित बाहिरबाट सिफारिस गरिएकामध्ये ४ हजार..
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । नेपाल फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि. (एनपिएल) का प्रबन्ध निर्देशक एवं औषधि उत्पादन [Mahendra-Bahadur] संघ (एपोन) का पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर अमात्यको एक्कासी मुटुको चाल घटेका कारण काठमाडौंको ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय..